HDPE -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha - Shiinaha HDPE Factory
1oz 30ml dhalada casaanka ah ee HDPE oo leh qoorta 16-410
Dhaladayada dhibicda cas ee 30ml ah waxay ka samaysan tahay wax HDPE ah. Adeegga OEM: Daabacaadda shaashadda xariirta Logo, Calaamadda Waraaqda, Calaamadda caaga ah, duubista. Waxay samayn kartaa astaanta shirkaddaada, waxay kor u qaadeysaa saamaynta sumcadda shirkaddaada. Qaabka guud ee dhalada caagga ah waa mid kooban, oo ku siinaysa waayo -aragnimo gacmeed oo ka wanaagsan iyo saamaynta muujinta shelf. Daboolka dhalada ayaa qaata daboolka daboolka iyo baakadka si loo hubiyo in 100% la xiro badeecada. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu shubo oo lagu kaydiyo dareeraha ugu badan.Waxay u fiican tahay dareeraha, saliidaha fudud, rinjiga, nuxurka, sigaarka elektiroonigga ah, dhibcaha indhaha, milixda, iwm si fudud ayaa loo nadiifin karaa. Dhalada dhinac ka sii dhumuc weyn Ku habboon baahida saabuunta cagaaran ama aalkolada Beddel weyn oo dhalada buufinta ah, yaree faddaraynta hawada.
1oz 30ml dhalada cad ee HDPE cad oo leh qoorta 18-410
Dhaladayada cad cad ee 1oz 3ml ah waxay ka samaysan tahay wax HDPE ah. Waxaa laga sameeyay 100% agabkii asalka ahaa ee PET resin.waxyaabaha baakadaha cagaaran, baaba'ayn kara, saaxiibtinimo ECO.Widely loo isticmaalo alaabta la isku qurxiyo iyo daryeelka shakhsiyeed Baakadaha caadiga ah ee saliidda maqaarka, shaambo, qaboojiye, saliid duugis fudud, dhalada kareemka maaskaro, saabuun dareere ah, tus jel, iwm. Adeegga OEM: Daabacaadda shaashadda xariirta Logo, Calaamadda Waraaqda, Calaamadda caaga ah, duubista. Cabbirka yar ayaa ku habboon socdaalka ama kaydinta iyo abaabulka guriga agtiisa. Si adag loo xirxiray si looga hortago daadinta iyo buuxinta baahiyaha kaydintaada.
3.4oz 100ml dhalada wareegsan oo cad oo HDPE ah oo leh 18-410 qoorta dhammaatay
3ml dabiici ah PE Qalabka maamulka suufka cudurada dumarka
Codsadeheena siilka/dabada 3ml wuxuu ka samaysan yahay maaddo PE ah, oo leh dhejin wanaagsan iyo dabacsanaan. Waxaa loo isticmaali karaa sidii qalab gaarsiinta daawada budada kiniinka. Tuubadu waa tuubo wareegsan oo leh dhexroor weyn. Wuxuu ku siin karaa dareen ka fiican iyo saamaynta muujinta shelf. Markaad isticmaaleyso, tallaabada ugu horreysa waa inaad ka saarto daboolka hore iyo daboolka dambe, tallaabada labaad waa inaad u dhoofiso dawada siilka ama dabada, tallaabada saddexaadna waa inaad isticmaasho daboolka dheer si aad usha riixitaanka ugu riixdo tuubada si aad u riixdo daawada ku jirta tuubada siilka ama dabada. Waxaa loo isticmaali karaa gudbinta dawada siilka, daryeelka siilka, dawaynta dabada, iyo baakadaha daryeelka dabada. Way fududahay in la qaado oo la isticmaalo. Codsadeheena siilka waa badeeco baakadeyn hal mar ah waxaana si shaqsi ahaan loo soo baakadeyn karaa aseptically. Haddii aad leedahay qaab ka fiican, waxaan ku siin karnaa habayn karti leh.
5ml dabiici ah PE Mashiinka maamulka suufka cudurada dumarka
Codsadeheena siilka/dabada 5ml wuxuu ka samaysan yahay maaddo PE ah, oo leh xirmo wanaagsan iyo dabacsanaan. Waxaa loo isticmaali karaa sidii qalab gaarsiinta daawada budada kiniinka. Tuubadu waa tuubo wareegsan oo leh dhexroor weyn. Wuxuu ku siin karaa dareen ka fiican iyo saamaynta muujinta shelf. Markaad isticmaaleyso, tallaabada ugu horreysa waa inaad ka saarto daboolka hore iyo daboolka dambe, tallaabada labaad waa inaad u dhoofiso dawada siilka ama dabada, tallaabada saddexaadna waa inaad isticmaasho daboolka dheer si aad usha riixitaanka ugu riixdo tuubada si aad u riixdo daawada ku jirta tuubada siilka ama dabada. Waxaa loo isticmaali karaa gudbinta dawada siilka, daryeelka siilka, dawaynta dabada, iyo baakadaha daryeelka dabada. Way fududahay in la qaado oo la isticmaalo. Codsadeheena siilka waa badeeco baakadeyn hal mar ah waxaana si shaqsi ahaan loo soo baakadeyn karaa aseptically. Haddii aad leedahay qaab ka fiican, waxaan ku siin karnaa habayn karti leh.
17 oz oo HDPE cad ah ayaa haya dhalo caag ah oo buufsan oo leh 28-400 qoorta dhammaatay
Dhalooyinkayaga 17 oz /500ml waxaa laga sameeyey alaab HDPE ah si loo adkeeyo oo loo adkeeyo. Jidhka dhalada ayaa gacanta lagu hayaa, oo ku siinaya waayo-aragnimo gacmeed ka fiican iyo saamaynta shaashadda gidaarka dhalada waxaa lagu qori karaa shirkaddaada, oo garabka 28/400 waxaa lagu qalabeyn karaa bamka buufinta, bamka buufinta iyo bamka xumbo, taas oo aad ugu habboon in la qaado oo la isticmaalo.Ma loo isticmaali karaa nadiifinta jikada, nadiifinta waraabinta dhirta, alaabta nadiifinta iyo baakadaha kale.
Qaab cusub 3-5ml cad dabiici ah PE qaybiyaha futada siilka
Tuubada jel -ka siilka ee 4ml ah waxay ka samaysan tahay maaddo PE ah, oo leh xidhitaan wanaagsan iyo dabacsanaan. Tuubadu waa wareegsan tahay oo usha riixitaanka gudaha waxaa lagu qalabeeyay giraanta silikoon, taas oo leh saamayn dhejin oo ka fiican. Wuxuu ku siin karaa dareen ka fiican iyo saamaynta muujinta shelf. Marka la isticmaalayo, tallaabada ugu horreysa ayaa ah in laga saaro daboolka hore iyo daboolka dambe, tallaabada labaad waa in la waafajiyo meesha laga soo iibsado daawada siilka ama dabada, tallaabada saddexaadna waa in la isticmaalo daboolka dheer si loogu riixo usha riixitaanka tubbo si loogu riixo daawada ku jirta tuubada siilka ama dabada. . Waxaa loo isticmaali karaa gudbinta dawada siilka, daryeelka siilka, dawaynta dabada, baakaynta daryeelka dabada, iwm. Way ku habboon tahay in la qaado oo la isticmaalo.
Qaab cusub 3ml dabiici ah PE qaybiyaha dawada siilka
Tuubada jel -ka siilka ee 3ml ah waxay ka samaysan tahay maaddo PE ah, oo leh xidhitaan wanaagsan iyo dabacsanaan. Tuubadu waa wareegsan tahay. Wuxuu ku siin karaa dareen ka fiican iyo saamaynta muujinta shelf. Markaad isticmaaleysid, tallaabada ugu horreysa waa inaad ka saarto daboolka hore iyo daboolka dambe, tallaabada labaad waa inaad ku toosiso meesha daawada laga soo geliyo siilka ama dabada, tallaabada saddexaadna waa inaad isticmaasho daboolka dheer si aad usha riixitaanka ugu riixdo tuubada si loogu riixo daawada ku jirta tuubada tubada Siilka ama dabada. Waxaa loo isticmaali karaa gudbinta dawada siilka, daryeelka siilka, dawaynta dabada, baakaynta daryeelka dabada, iwm. Way fududahay in la qaado oo la isticmaalo.
2000ml casaan HDPE dhalo fidsan oo leh 56-410 qoorta dhammeystiran
Dhaladayada 2L HDPE (polyetylen cufnaanta sare) Dhalo caag ah oo dabool leh, raagaya oo dib loo warshadeyn karo.Waxay ku fiican tahay saliidda lagama maarmaanka ah, saabuunta, kareemka, shaambo, saliidda jirka, rinjiga, khad, dareeraha shaybaarka, kiimikooyinka, midabka, xabagta iyo dhejisyada reagent, muunado, isticmaalka maalinlaha ah ama alaabta guriga lagu sameeyo. Waxay aad ugu adkeysaneysaa saliidaha iyo kiimikooyinka badankood, si kastaba ha ahaatee kuma haboona daxalka xooggan iyo gelinta dareerayaasha dabiiciga ah Daboolida Daboolida Caddaynta ， Ilaali waxyaabaha ku jira.
1000ml buluug ah HDPE dhalo labajibbaaran oo leh 56-410 qoorta dhammaatay
Dhaladayada 1L HDPE (polyetylen cufnaanta sare) Dhalo caag ah oo dabool leh, raagaya oo dib loo warshadeyn karo.Waxay ku habboon tahay saliidda lagama maarmaanka ah, kareemka, shaambo, saliidda jirka, rinjiga, khad, dareeraha shaybaarka, kiimikooyinka, midabka, xabagta reefentka iyo dhejisyada, shaybaarka, isticmaalka maalinlaha ah ama alaabta guriga lagu sameeyo. Wuxuu aad ugu adkaysan karaa saliidaha iyo kiimikooyinka badankooda, si kastaba ha ahaatee kuma haboona daxalka xooggan iyo gelinta dareeraha dareeraha ah.